Debian 10 "Buster" iri pano | Linux Vakapindwa muropa
Mushure memwedzi makumi maviri neshanu kukura kwekumirira, Debian 25 ikozvino yabuda. Iyo nyowani yakagadzikana vhezheni Debian 10 "Buster" Yakagadzirira uye iwe unogona kuyedza izvozvi. Uye zvakare, ichave iri vhezheni inotsigirwa kwemakore mashanu, kana iwe uchitsvaga yerefu-refu chikuva iyo isingamire kugamuchira zvigadziriso. Kune rimwe divi, vese avo veDebian-based distros, kusanganisira Ubuntu, vachakwanisa kubatsirwa kubva pachigadziko ichi chekuburitswa mune ramangwana.
Kuti uwane icho, iwe unotoziva kare kuti iwe unofanirwa kuenda kunzvimbo yekurodha yeiyo Debian chirongwa chepamutemo webhusaiti uye kubva ipapo sarudza vhezheni yeiyo distro yaunoda, mune ino kesi Debian 10 ye download ISO mufananidzo yezvivakwa zvako. Nenzira, kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinga.
Iko kumirira kwave kwakakodzera, uye ndinoda kutenda basa rakaoma renharaunda yeDebian nekuita izvi zviitike. Mukuburitswa kutsva uku unogona kuwana GNOME 3.30 senzvimbo yedesktop default uchishandisa Wayland pachinzvimbo cheXorg, inova nhanho huru yekukwiridzira kune yekare server X. Zvakare, zvekuchengetedza zviwedzero zveAppArmor kernel zvinogoneswa nekutadza.
Pakati pekugadzirisa, iwe une Linux 4.19 seDebian 10 kernel, mukuwedzera kune yakawanda pre-yakaiswa software iyo yakagadziridzwa zvakare. Pakati pemapakeji akavandudzwa zvakare akati wandei enzvimbo dzedesktop dziripo, seCinnamon 3.8, KDE Plasma 5.14, LXDE 0.99.2, LXQt 0.14, MATE 1.20, Xfce 4.12. Nenzira, kana iwe uchida kuyedza pasina kuiisa, iwe unotoziva kuti iwe unogona kushandisa Live kuti uone zvese nhau, uye kana zvikakunyengetedza, zviite yako diki distro ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Debian 10 "Buster" iri pano